Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → décembre → 10 → Ambato-Boeni : Dahalo sivy lahy tratra, nentina namakivaky ny tanàna
Noho ny ezaka nataon’ny zandary sy ny fokonolona miaraka, dia nahomby ny fiaraha-miasa. Ny zoma 7 desambra tolakandro lasa teo, dia dahalo siivy lahy saika tanora avokoa, no nentin’ny zandary niditra sy namakivaky ny tanàna, ka horakoraka sy fahatezerana no nafitsoky ny vahoaka tamin’izany. Dahalo sivy lahy izay niravaka ody gasy.
Fantatra araka ny vaovao voaray avy tany an-toerana, fa ireo dahalo ireo dia anisan’ny mpampihorohoro ny eny ambanivohitra ary anisan’ireo dahalo mpangalatra omby sy efa ela nandrasana, ka zao tratra izao, noho ny fiaraha-miasan’ny zandary sy ny fokonolona. Tsapa, fa saika tanora avokoa ireo sivy lahy ireo, fa ny fanadihadiana ataon’ny zandary no ahafantarana ireo asa ratsy nataony sy ireo atidoha mikotrika. Manentana ny vahoaka ny zandary mba hisiana hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny fanomezam-baovao marim-potitra eny ifotony hiadiana amin’ny asan-jiolahy.
Rolland Edouard Firmin 10 décembre 2018 at 19 h 06 min · Edit
Efa tsara lay ezaka ary miary soa mba ho tratra sy ho fantatra ny mpaniraka sy mpiray tsikombakomba ary mpividy ireo omby halatra ataon’izy ireo satria raha tsy misy ny mpividy omby halatra tsy hisy ny mpangalatra ary ampitoviana ihany koa sazy ampiharina amin’izy reo